राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिका - नेपाल
संस्थागत ढंगले काम गर्ने, योग्यता–क्षमता हेरेर नेता/कार्यकर्ता परिचालन गर्ने, विगतका अनुभवको राम्रो अन्तर्क्रिया गर्ने हो भने हामी राम्रो ढंगले अघि बढ्न सक्छौँ । जनताले ठूलो आशा/अपेक्षा गरेर नेकपालाई झन्डै दुई तिहाइ मत दिएका छन् ।
ओली सरकारको ग्राफ ओर्लंदै गर्दा नेकपामा माधव नेपालको पल्ला भारी
नेपालको कहिल्यै संस्थागत हुन नसकेको विपद् व्यवस्थापनको कुरूप अनुहारमा यस पटक संघीयताको नयाँ कोण निस्केको छ । बाढीपीडितको उद्धार, राहत र स्थानान्तरणमा राज्यको चरम उदासीनताको दोष यस पटक संघीय राज्य प्रणालीले पाएको छ ।
[सम्पादकीय] भ्रमण वर्षको लठिभद्र
दुई दशकअघिको अस्थिरता र अशान्ति अनि एक दशकअघिको पट्यारलाग्दो राजनीतिक संक्रमणको चंगुलबाट उम्केर नेपाल अब आर्थिक फड्को हान्न तयार छ भनी सन्देश सम्प्रेषित गर्ने असाध्यै अनुकूल अवसर हुन जानेवाला थियो– नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० ।
[सम्पादकीय] द्वन्द्वपीडितलाई न्याय देऊ
दशक लामो कहालीलाग्दो सशस्त्र द्वन्द्व सर्वसाधारणले भुलेका छैनन्, पीडितले बिर्सने झन् कुरै भएन । बिर्सेजस्तै गरेर पन्छाउँदै हिँडेका छन् त राजनीतिक दल र नेताहरूले मात्र ।
महिला र सीमान्तकृतले लामो संक्रमणकालको असर र फेरबदल भइरहने राजनीतिक समीकरणबाट निम्तिने उथलपुथलको भार बोकिरहनु परेको छ ।
बर्सेनि त्रासमा गाउँबस्ती
जहाँ युवा बूढो एपमा रमाइरहेका छन्, त्यहीँ वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले बूढो हुन मन छैन भन्दै गीत गाएका छन् ।
कलाकार सन्नी शाक्य, ३०, ले हलिउडको सुपर तथा काल्पनिक दुनियाँमा रमाउने सुपरहिरो तथा कलाकारलाई नेपाली शैलीमा प्रस्तुत गरेका छन्, टोइग्राफीमा ।
फरक विधाका सिनेमा बनाउने साहस नगन्य सिनेकर्मीमा मात्र हुन्छ । यही कारण हुनुपर्छ, संसारभर निकै रुचाइने हरर जनराका फिल्म हामीकहाँ वर्षमा एक–दुई मात्र बन्छन् । अघिल्लो वर्ष सुनकेशरीरिलिज भयो, अहिले घर । लेखक निर्देशक एकै हुन्, अर्पण थापा ।
भुइँतलाको कोठामा फलामको वेल्डिङ भइरहेको छ, सँगैको दोस्रो कोठामा कार्पेटमा कागजबाट बनेका स–साना आकृति छन् ।
Tweets by @NepalMagazine
छिमेकीको जालसाजी - ११:३२ AMसधैँभरिको कहर - श्रावण ५, २०७६, ०४:३२ PMबूढो भइएछ - श्रावण ५, २०७६, ०४:०५ PM[विशेष] गल्ती गर्दै, सच्याउँदै - श्रावण ५, २०७६, ०२:१० PM३९ मिनेट, ११० रुपैयाँ - श्रावण ५, २०७६, ०१:३५ PMकलामान्डुमा टोइग्राफी - श्रावण ५, २०७६, ११:३६ AM[सम्पादकीय] भ्रमण वर्षको लठिभद्र - श्रावण ५, २०७६, ११:२१ AM
थप समाचार हेर्नको लागि nepal.ekantipur.com/time
वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी मुद्दा बनिरहेका बेला नेपालमा भने स्थायी संरचना अभाव
आफ्नो जातीय विशेषाधिकार गुम्ने हो कि भन्ने त्रासले वर्णवादीहरुमा घर गरेको छ ।
नेपालमा मृत्युदण्ड छैन । जुन देशमा मृत्युदण्डले कानुनी मान्यता पाएको छैन, त्यहाँ राज्यबाट गरिने कुनै पनि क्रूर हत्या ‘गैरन्यायिक’ हुन्न । राज्य–आतंक हुन्छ ।
सरकार भन्छ, प्रकाशन उद्योगलाई संरक्षण गर्ने हेतुले यस्तो नीति अँगालिएको हो । तर यस्तो ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्न हिजो सरकार असमर्थ थियो । आज पनि समर्थ छैन ।
प्राकृतिक उज्यालो र रंगीन सेटिङ मन पर्छ भने तपाईंका लागि हुन सक्छ, डल्ले रेस्टुराँ । पिरो डल्ले खुर्सानीको नाममा रेस्टुराँ खोले पनि यहाँ परिकार भने स्वादिष्ट छन् ।
कस्तूरीमा विद्यावारिधि गर्ने तेस्रा नेपाली हुन्, पारसविक्रम सिंह । चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सबाट ’कस्तूरीको आनीबानी र पर्यावरण’ शीर्षकमा पीएचडी सकाएर भर्खरै नेपाल फर्किएका उनले हिमालयको दक्षिणी मोहडा केन्द्रित स्थलगत अध्ययन गरेका थिए ।
नेपालमा कस्तूरीको संख्या कति छ ?
सूर्य अस्ताएपछि र उदाउनुअघि मात्रै क्रियाशिल हुने जन्तु भएकाले ठ्याक्कै संख्या निकाल्न गाह्रो छ । बास बस्ने ठाउँमा भेटिएको दिसाको घनत्व हेर्दा २ हजारदेखि २५ सयको संख्यामा हुन सक्छ ।
संरक्षण नभएर कम संख्या देखिएको हो ?
दुर्लभ वन्यजन्तु भएकाले संरक्षण स्वाभाविक हो । संरक्षित वन्यजन्तु हेर्न पर्यटक आउँछन् तर यस्ता वन्यजन्तुको संख्या घटिरहेकाले संरक्षणको परम्परागत धारणा बदल्नुपर्छ ।
संख्या कसरी बढाउने ?
विभिन्न कारणले लोपोन्मुख र दुर्लभ वन्यजन्तुको संख्या घटिरहेको छ । संख्या घट्नुको मुख्य कारण चोरी सिकारी हो । अब प्रकृति र पालन दुवै माध्यमबाट यसको संरक्षण गर्नुपर्छ ।
पालनबाट कस्तूरी संरक्षण कसरी हुन्छ ?
पालेपछि एकातिर संरक्षण हुन्छ भने अर्कोतिर चोरी सिकारी रोकिन्छ । फेरि वन्यजन्तुको संरक्षण मात्र होइन, उपयोग पनि जरुरी छ । कस्तूरीको बिना महँगो मूल्यमा बेच्न सकिन्छ । यसको नाभिमा हरेक वर्ष सुगन्धित गोलो थैली अर्थात् बिना निस्कन्छ । एउटा निकालेपछि फेरि अर्को पलाउँछ । कस्तूरी १५ देखि २० वर्ष बाँच्छ । एक वर्षको उमेरदेखि भाले कस्तूरीको बिना निकाल्न मिल्छ । एउटा कस्तूरीले औसतमा १५ वटा बिना दिन सक्छ ।
कस्तूरीको बिना कहाँ बेच्ने ?
चीनले सन् १९५० देखि नै कस्तूरी पाल्न थाल्यो । थुप्रै कस्तूरी फार्म छन् । कस्तूरीपालनका लागि मात्र थुप्रै अनुसन्धान संस्था छन् । तैपनि त्यहाँ मागअनुसार बिना उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । प्रतिवर्ष हजारदेखि १ हजार ५ सय किलो माग भएको चीनमा ७० किलो मात्रै उत्पादन हुन्छ । सन् २०२५ सम्म प्रतिवर्ष ३ सय किलो पुर्‍याउने उसको लक्ष्य छ । हामीलाई बजारको चिन्तै छैन ।
चीनमा बिनाको मूल्य कति पर्छ ?
सुनभन्दा तीनदेखि पाँच गुणा बढी मूल्यमा बिक्री हुन्छ । नेपालमा पाइने हिमाली कस्तूरी सबैभन्दा ठूलो जातको हो । हिमाली र कस्मिरी कस्तूरीपालन अहिलेसम्म भएको छैन । यसैले हाम्रो कस्तूरीका बिना अझ बढी मूल्यमा बेच्न सकिन्छ । ठूलो जातको कस्तूरीको बिनामा मस्कोन नामक तरल रसायन बढी हुन्छ ।
बिनाको उपयोग केमा हुन्छ ?
चिनियाँ परम्परागत पद्धतिमा बन्ने औषधीमा यो खपत हुन्छ । जडीबुटीबाट बन्ने औषधीमा त्यो मिसाइन्छ । चार सय किसिमका औषधीमा यो प्रयोग हुने चिनियाँले पत्तो लगाइसकेका छन् । यसबाहेक युरोपमा बिना मिसाएर महँगा अत्तर बन्छन् ।
नेपालमा यसको उपयोग हुँदैन ?
मैले पुराना व्यक्तिसँग कुरा गर्दा नेपालमा बिना टनिकका रुपमा प्रयोग हुन्थ्यो भन्ने थाहा पाएँ । खासगरी बच्चालाई खुवाउँदा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ ।
कानुनी रुपमा कस्तूरी पाल्न मिल्छ ?
यसबारे वन मन्त्रालयमा पटक–पटक छलफल गर्‍यौँ । पाल्न सकिने जनावरको सूचीमा कस्तूरी पनि राख्ने हिसाबले कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको छ ।
यसको पालन कुन क्षेत्रमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ?
चिसो ठाउँमा बस्ने भएकाले २५ डिग्रीभन्दा बढी तापक्रम हुनुहुँदैन । हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा यो एकदमै फस्टाउन सक्छ ।
कस्तूरी पालेपछि नियमन जटिल नहोला ?
यो नियन्त्रित व्यापार हो । खुला बजारमा यसलाई प्रवेश गराऊनु हुँदैन । क्रेता र बिक्रेता दुवैले कारोबारको लाइसेन्स लिएका हुन्छन्, चीनमा । लाइसेन्सवालाले मात्रै कारोबार गर्न सक्छन् । नियमनबारे चाहिँ सरकारले राम्ररी सोच्नुपर्छ ।
६० किलोमिटरमा निर्माणाधीन परियोजना हेलम्बु गाउँपालिकाले ८० मिटर पर्खाल बनाइसकेको छ । यसै विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष दोङ्बा निमा ग्याल्जेनसँग कुराकानी :
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै हातको इशाराले सवारी साधनलाई निर्देशन दिइरहेकी देखिन्छन्, मनीषा बुढाथोकी ।
विश्वको सबैभन्दा पुरानो फुटबल प्रतियोगिता हो, कोपा अमेरिका । १ सय ३ वर्षअघि अर्थात् सन् १९१६ बाट सुरु भएको प्रतियोगिताले १२ औँ संस्करण पूरा गरेपछि मात्रै फुटबलको महाकुम्भ विश्वकप सुरु भएको थियो । सन् १९७५ अघि दक्षिण अमेरिकी फुटबल च्याम्पियनसिपको नाममा आयोजना भएको प्रतियोगितामा १९९० पछि मात्रै उत्तर अमेरिका र एसियाबाट टिमहरूलाई आमन्त्रण गर्न थालिएको हो । सन् १९९३ पछि १० दक्षिण अमेरिकी टिम र दुई आमन्त्रित गरी १२ टोलीका सहभागिता हुन थाल्यो कोपा अमेरिकामा । आमन्त्रितको रूपमा सर्वाधिक कोपा अमेरिका खेल्ने टोली मेक्सिको हो । उसले १० संस्करणमा सहभागिता जनाइसकेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले ४ पटक, कोस्टारिकाले ५ पटक, जमैकाले २ पटक, जापान, हाइटी, पानामाले एक–एक पटक प्रतियोगितामा आमन्त्रित टोलीको रूपमा सहभागिता जनाइसकेका छन् ।
नेपालमा भने कोपाको लोकप्रियता दक्षिण अमेरिकी टोलीले लामो समय विश्व फुटबलमा देखाएको दबदबाको कारण हो । फुटबल हेर्ने प्रशंसकलाई कुन टोलीको खेल मनपर्छ भनेर सोध्यो भने ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको नाम आइहाल्छ । तर, उत्कृष्ट फुटबल कहाँ खेलिन्छ भनेर सोधियो भने युरोपको नाम आउनेमा कुनै द्विविधा छैन । युरोपको व्यावसायिक फुटबलको विस्तार नेपालसम्म भइसकेको छ ।
हुन पनि पछिल्लो समय युरोपेली टोलीले विश्व फुटबलमा गरेको उम्दा प्रदर्शन प्रशंसायोग्य छ । युरोपेली टोलीले पछिल्ला ४ वटा विश्वकपको उपाधि उचालिसकेको छ । सन् २००२ अघि दक्षिण अमेरिकी टोलीले लगातार दुईपटक विश्वकप उचाल्न मात्रै सकेका थिएनन् तर बढी जित्नेमा उनीहरू नै थिए । तर, यसपटकको रुस विश्वकपमा त स्थिति कस्तोसम्म भयो भने सेमिफाइनल पुग्नै सबै चार टोली युरोपका थिए । क्वार्टरफाइनलमा स्थान बनाएका ८ मध्ये ६ टोली युरोपका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा युरोपको बढ्दो प्रभाव यसले पनि देखाउँछ ।
सन् २०१० अघिसम्म युरोपबाहिर आयोजना भएको विश्वकप उचाल्ने युरोपेली टोली नै थिएनन् । पछि सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना भएको विश्वकप फुटबलको उपाधि स्पेनले र सन् २०१४ मा ब्राजिलमा भएको विश्वकप जर्मनीले जित्यो ।
समय सधैँ यस्तो थिएन । क्लब फुटबलमा युरोपको दबदबा रहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा दक्षिण अमेरिकी टोलीको एकछत्र राज हुने गर्थ्यो । त्यसको एउटै उदाहरण ब्राजिल हो । सन् १९५८ देखि ७० सम्म आयोजना भएका ४ वटा विश्वकपमध्ये उसले ३ वटा आफ्नो पोल्टामा पार्‍यो । त्यस्तै सन् १९९४ देखि २००२ मा भएका ३ मध्ये विश्व फुटबलको २ वटा महाकुम्भको उपाधि ब्राजिलले जित्यो । त्यसबीचमा अर्को दक्षिण अमेरिकी टोली अर्जेन्टिनाले सन् १९७८ र १९८६ मा विश्वकप उचाल्यो ।
तर, अहिले समय बदलिएको छ । फुटबल खेल्ने तौरतरिका पनि बदलियो । त्यसको प्रभाव दक्षिण अमेरिकी टोलीको नतिजामा देखिन थालेको छ । सन् २०१४ को फाइनल अर्जेन्टिनाले खेले पनि पछिल्ला ४ संस्करणको विश्वकप फाइनलमध्ये ३ वटा युरोपेली डर्बी बन्न पुग्यो । हरेक चार वर्षमा ब्राजिली र अर्जेन्टिनी फुटबलको व्यापक चर्चा हुने गर्छ । यसपटक उनीहरूले केही जादु गर्लान् कि भन्ने आश पनि हुन्छ । तर, मैदानमा त्यस्तो केही हुँदैन । किन त ? दक्षिण अमेरिकी फुटबललाई के भयो ?
यसको अर्थ के होइन भने दक्षिण अमेरिकी फुटबल तहसनहस भइसक्यो । ब्राजिलले विश्वस्तरीय खेलाडी उत्पादन गर्न नसकेको पनि होइन । अर्जेन्टिनामा पनि युवा खेलाडीको उत्पादन भइरहेकै छ । तर, मुख्य कारक हो– भूमण्डलीकरण । फुटबल अहिले विश्वमै चर्चाको शिखरमा छ । यही चर्चाले व्यावसायिकतालाई जग हालेको छ र यहाँ पैसाको खोलो बग्न थालेको छ । त्यसको मुहान युरोप र युरोपेली क्लब हाँक्ने धनाढ्यहरू हुन् ।
त्यसो त स्वयं दक्षिण अमेरिकीहरू पनि सानै उमेरका फुटबल खेलाडीको युरोपेली क्लबप्रतिको मोहका कारण राष्ट्रिय टोलीको प्रदर्शन खस्केको विश्वास गर्छन् । राष्ट्रिय टोली र लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेहरू पनि लामो समय त्यहीँ टिकिरहन सक्दैनन् । फलतः विभिन्न संरचनाका फुटबल खेलेर हुर्किएकाहरूबीच तालमेल मिलाउन कठिन हुन्छ किनकि युरोपेली र दक्षिण अमेरिकी फुटबल शैलीमा आकाश–जमिनको अन्तर छ ।
राष्ट्रिय टोलीमा अटाउने खेलाडीले एकै खाले लिग खेल्दाको परिणाम बुझ्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । सन् २०१४ मा जर्मनीले विश्वकप उचाल्दा टोलीका अधिकांश सदस्य बुन्डेस लिगाका थिए । स्पेनले २०१० मा विश्वकप जित्दा टोलीमा अटाएका खेलाडी ला लिगा खेल्ने अधिक थिए । इटालीले २००६ मा विश्वकप जित्दा सिरी आ का खेलाडीको भर पर्नु परेको थियो । यो मामिलामा फ्रान्स अपवाद बन्यो ।
राष्ट्रिय टोलीका सदस्यको खेल्ने शैलीको एकरूपताले पार्ने प्रभाव दक्षिण अमेरिकी टोलीमा मात्रै सीमित छैन, नेदरल्यान्ड्सको टोली आयाक्स डच फुटबलमा उत्कृष्ट खेलाडी जन्माउने पावरहाउसको रूपमा पनि परिचित थियो । अहिले १९ वर्षमुनिका खेलाडीहरूले चाँडै क्लब परित्याग गर्न थालेका छन् । परिणाम नेदरल्यान्ड्स फुटबलका २ महत्त्वपूर्ण प्रतियोगितामा छनोट हुनै सकेन । खेलाडीले सानै उमेरमा राष्ट्रिय क्लब छाड्नु ठूलै समस्या हो । तर, त्यसको एउटै कारण हो– पैसा । फुटबलमा पैसा छ युरोपमा । त्यसैले दक्षिण अमेरिकी भूमिमा उत्पादन हुने उम्दा खेलाडीहरू आफ्नै माटोमा लामो समय टिक्दैनन् किनकि त्यहाँ पैसा छैन । र, फिफामा आबद्ध महादेशमध्ये दक्षिण अमेरिकी महादेश भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । त्यसैले युवामा उसले लगानी बढाउन सकेको छैन ।
पछिल्लो विश्वकपमा ब्राजिल, उरुग्वे र अर्जेन्टिनाले मैदान उतारेका खेलाडीको उमेर अन्य टोलीभन्दा धेरै बढी थियो । दक्षिण अमेरिकी युवा टोलीले ठूला प्रतियोगिता नजितेको धेरै भइसक्यो । अर्जेन्टिनाले ११ वर्ष र २० वर्षमुनिको विश्वकप जितेको थियो । त्यतिबेला टोलीमा सर्गियो एग्युरो र एन्जेल डी मारिया सदस्य थिए । भन्नुको तात्पर्य– पछिल्लो पटक युवा विश्वकप जित्ने दक्षिण अमेरिकी टोलीका सदस्यहरू आफैँ सिनियर टोलीका लागि बूढा र थकित भइसकेका छन् ।
अर्कोतर्फ युरोपेली टोलीहरू युवालाई प्रोत्साहित गर्दै छन् । जर्मनीको युवा टोलीले पछिल्लो समय कन्फेडेरेसन कप जित्यो, युवा टोलीमा विश्वास गरेको इंग्ल्यान्ड पछिल्लो विश्वकपको सेमिफाइनलसम्म पुग्यो, बेल्जियमको टोलीमा पनि युवाको बाहुल्य छ भने विश्वकप विजेता फ्रान्सको टोलीका सदस्यहरू आफ्नो उत्कृष्ट समयमा पुग्न अझै बाँकी छ । कुनै समय थियो, जतिबेला विश्व फुटबललाई दक्षिण अमेरिकी र युरोपेलीबीचको घोडादौडको रूपमा परिभाषित गरिन्थ्यो । तर, अहिले यो दौडबाट एउटा घोडा गायब भए बराबर छ ।
खेल दक्षिण अमेरिकामा नजर युरोपमा
कोपा अमेरिका लियोनेल मेसी, हामेस रोड्रिग्वेज, एलेक्सिस सान्चेज, फिलिप काउटिन्होजस्ता खेलाडीको प्रदर्शनमा मस्त रहने मात्र होइन, केही नयाँ खेलाडीको उदयको पनि प्रतीक्षामा छ । त्यो भनेको उनीहरूलाई क्लबमा भित्र्याउन अब युरोपेली स्काउटहरू गर्ने तँछाडमछाड नै हो । क्वार्टर फाइनलसम्मका प्रदर्शनबाट नयाँ सिजन युरोप जान सक्ने पाँच खेलाडीमा छन्–
२३ सदस्यीय ब्राजिली टोलीमा युरोपेली फुटबल नखेल्ने ३ मध्येका एक खेलाडी हुन्, एभर्टन । विश्वकपमा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसके पनि २९ वर्षीय विंगरले ग्रेमियोबाट १२ खेलमा ६ गोल गरिसकेका छन् । त्यसैको आधारमा उनी कोपाका लागि राष्ट्रिय टोलीमा छनोट भए ।
२ जोसेफ मार्टिनेज
(एट्लान्टा युनाइटेड, भेनेजुएला)
फुटबल प्रशंसकबीच २६ वर्षीय मार्टिनेज पेनाल्टी प्रहार गर्ने अद्भुत कलाका कारण परिचित छन् । सन् २०१८ मा एट्लान्टालाई अमेरिकाको मेजर लिग सकरको विजेता बनाएका यिनले ३९ खेलमा ३५ गोल गरेका थिए । उनले गोल्डन बुट मात्र होइन, मोस्ट भ्यालुएवल प्लेयरको अवार्ड पनि जिते ।
३ एक्सिक्वेल पालासियो
(रिभर प्लेट, अर्जेन्टिना )
सन् २०१८ मै स्पेनी क्लब रियाल मड्रिडको नजरमा परेका पालासियो आर्सनल जाने हल्ला पनि चलेको थियो । जारी प्रतियोगितामा अर्जेन्टिनाबाट राम्रो प्रदर्शन गरे उनी लामो समय
गृहमैदानको लिगमा रहने छैनन् ।
४ नाहितान नान्डेज
(बोका जुनियर्स, उरुग्वे)
अर्जेन्टिनाको बोका जुनियर्सबाट खेल्ने उरुग्वेका मिडफिल्डर नान्डेजले सन् २०१५ मा राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यु गरेयता २२ क्याप जितिसकेका छन् । बोका जुनियर्सलाई सन् २०१७/०१८ मा टाइटल जिताएका यिनले सन् २०१८ को विश्वकपमा उरुग्वेबाट सबै खेलमा सहभागिता जनाएका थिए ।
५ सेन्टियागो अर्जामेन्डिया
(सेरो पोर्तेनो, पाराग्वे)
२१ वर्षीय फूलप्याक अर्जामेन्डिया ओभरल्यापमा गएर खेल्न पनि माहिर छन् । सेट पिस गर्ने अद्वितीय कलाका कारण सेरो पोर्तेनोका भरपर्दा खेलाडीका रूपमा उनको दर्ज हुन्छ । गत मार्चमा राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यु गरेका यिनी यसै सिजन युरोपको ढोका उघार्ने प्रयासमा छन् ।
नेपाली दर्शकले हेर्न पाएनन् कोपा अमेरिका
कोपाको ज्वरोले यसपटक नेपाली दर्शकलाई छोएन । नेपाली केबल टिभीले प्रसारण गर्न नसक्दा यसपालि कोपा अमेरिका फुटबलका नेपाली प्रशंसकले सहजै प्रतियोगिता हेर्न पाएनन् । विश्वकप र च्याम्पियन्स लिगपछि नेपालमा सर्वाधिक रुचाइने खेल कोपा अमेरिका हो ।
गत मे ३० देखि आगामी जुलाइ १४ सम्मको किक्रेट प्रतियोगिता आईसीसी विश्वकपको मारमा पर्‍यो, कोपा अमेरिका फुटबल । कुनै पनि भारतीय टिभी च्यानलले कोपा अमेरिका प्रसारण गरेनन् । विगतका संस्करणमा नेपाली दर्शकले भारतीय च्यानलबाट यो प्रतियोगिता हेर्थे । सहज र कम खर्चमा भारतीय मिडियाबाट प्रसारण अधिकार ल्याउँदै आएका नेपाली केबल टिभीले सीधै ल्याउन ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भएपछि कोपा अमेरिका प्रसारण गरेनन् । जुन १४ बाट सुरु भएको विश्वकै पुरानो कोपा अमेरिका फुटबलमा यसपटक दुई एसियाली मुलुक सहभागी छन्, जापान र कतार ।
जापानले दोस्रोपटक प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको हो भने कतार पहिलोपटक सहभागी हुँदै छ । नेपाली फुटबलप्रेमी इन्टरनेटको माध्यमबाट कोपा अमेरिका फुटबल हेर्न बाध्य छन् । आगामी वर्ष अर्जेन्टिना र कोलम्बियामा संयुक्त रूपमा हुने कोपा अमेरिकाको ४७ औँ संस्करणलाई नेपाली केबल टिभीले सीधै नेपाली च्यानलबाट प्रसारणको प्रयास गर्ने बताएका छन् । तर लगानी र पहुँचका हिसाबले नेपाली केवलबाट सीधै प्रसारण गर्न त्यति सहज भने छैन ।
१६ जेठदेखि जारी क्रिकेट कुम्भमेलामा नेपाल प्रतियोगितामा छनोट नभए पनि खेलप्रेमीको आसक्ति भने दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।
नेपाली कांग्रेसभित्र प्रखर गणतन्त्रवादीको छवि बनाएका र पार्टीभित्र गणतन्त्रको वकालत गरेबापत त्यसबखत कारबाही र किनारामा पारिएका नरहरि आचार्य केही वर्षयता स्वास्थ्यमा अकस्मात् आएको असुविधापछि राजनीतिबाट केही छायामा परेजस्तो समय व्यतीत गरिरहेका थिए । त्यही असुविधा सामना गरिरहेको दिनमा उनले सरल, पठनीय र आकर्षक शैलीमा बन्दी वृत्तान्त लिएर आफ्नो सक्रियताको भिन्न स्वरुप जारी राखेका छन् । यो राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा मञ्चित शाही कदमका दिनमा सञ्चालित धरपकड, नियन्त्रण र दमनका सिलसिलामा दुई पटक बन्दी रहेका बेला लिखित डायरी हो । नेपाली भाषामाथिको आचार्यको गहिरो पकड, लेखनशैलीको उच्चता र सरलता यो पुस्तकमा खुलेर आएको छ ।
गणतन्त्रलाई बयलगाडा चढेर अमेरिका जाने तमासा भनेर सस्तो टिप्पणी गर्नेहरु सत्तामा आसीन भएको यो समय डेढ दशकअघिको नेपाली समाजले कोल्टे फेर्न गरेको तपस्या विस्मृतितिर गएको छ । यही बेला आचार्यको गणतन्त्रको यात्रा बन्दी वृत्तान्तले एक पटक सतही रुपमा भए पनि स्मरण गराउँछ । भलै यसले गणतन्त्रका ‘खास यात्री’ हरुलाई सर्वथा बेवास्ता गरेको छ । गणतन्त्र आउनुको वस्तु यथार्थलाई नजरअन्दाज गरेको छ । तर कसरी बयलगाडा सिद्धान्तका विश्वासीहरु राजाकै तानाशाहीमा पनि केही दिन पक्राउ गरिएजस्तो गरेर छाडिए । उनीहरुभन्दा तल्लो हैसियत भएका उही पार्टीका कार्यकर्ता महिनौँ सरकारी बन्दी जीवन बिताउन विवश भए भन्ने तथ्यले हामीलाई गणतन्त्रको ताज कसरी यसको ‘स्वत्व’ लाई नै नामञ्जुर गर्नेहरुकोमा बन्दी छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ ।
पुस्तकमा आचार्यले उल्लेख गरेको विवरणले कांग्रेसभित्र कसरी चक्र बाँस्तोलाहरु पछाडि धकेलिए र कृष्ण सिटौलाहरु राजनीतिमा गड्गडाएर अघि आए, दिल्लीलाई पानीपँधेरो बनाउने सिटौला, सुजाताहरुको क्रियाशीलताले नेपाली राजनीतिमा बाह्य योजनामा कसरी नेताहरु अघि सारिन्छ भन्ने संकेत गर्छ ।
आचार्य आफैँ पनि आफ्नो वृत्तान्तभरि नेपाली राजनीतिको निर्णायक स्तम्भ जनता र तिनको बलियो संघर्ष हो भन्ने विश्वासमा रहन सकेको देखिँदैन । कहीँ–कतै आन्तरिक रुपमा नेपाली दलहरुले गर्ने निर्णय प्रमुख हो भनेर उल्लेख गरे पनि निरंकुशताविरुद्धको संघर्ष या राजनीतिका निर्णायक जनताको भूमिका, उनीहरुको धारणालाई आचार्यले दोयम रुपमा समेत महत्व दिएको देखिँदैन ।
भारत, अमेरिका या विदेशीले के गर्लान्, माओवादीले के गर्ला भन्ने परमुखी अपेक्षामा आचार्य केन्द्रित देखिन्छन् किताबमा, मुखर रुपमै । यो परमुखी चिन्तन उदेकलाग्दो छ । जनतामा, जनताको प्रतिक्रिया के होला भन्नेमा रत्तिभर उत्सुकता, भरोसा नदेखिनु उनको राजनीतिक प्राथमिकताको त उद्घाटन हो नै, नेपाली राजनीतिको परमुखी प्रवृत्तिको नजानिँदो सत्यको उद्घाटन पनि हो ।
आचार्यको बन्दी वृत्तान्तमा उल्लिखित परमुखी प्रवृत्तिले निराश तुल्याएपछि मलाई बीपी कोइरालाको बन्दी वृत्तान्तको सम्झना हुन्छ । बीपी जनतामाथि, आधारभूत तहका मानिसप्रति अदम्य विश्वास र श्रद्धा गर्छन् । लेख्छन्, ‘तानाशाही व्यवस्थाको विरुद्ध जुलुस झिकेछन् । ...दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, गरिब देशबासीहरु मेरा माटाका देवता पनि त्यसमा लागेका रहेछन् (जेल जर्नल, पृ १६) ।
सत्ताविरुद्ध भएका एकाध जनविरोधलाई पनि बीपी भव्य सौन्दर्यकरण गर्छन् । आशा–उज्यालोको अद्भुत उद्घाटन देख्छन् । उनलाई जनताको चलमलाहट, तानाशाही सत्ताविरुद्ध कार्यकर्ताको विरोध अँध्यारोमा चम्किएको बिजुली लाग्छ । लेख्छन्, ‘त्यस अँध्यारो बादलको सबभन्दा कालो क्षेत्रमा–एउटा बिजुली हठात् झल्केछ । त्यहाँको नरनारी, सैनिक–असैनिक अनुहारलाई एकछिन उज्यालो पार्दै– केवल बादलको अन्धकारलाई झन् कालिमामय बनाउँदै । ...यो एउटा बडो साहसको कार्य थियो, जुन साहसलाई महान लक्ष्यका निम्ति मानिसले कहिलेकाहीँ मात्र प्रदर्शित गर्छ । ...इतिहासका यी तमाम सानासाना कुरा– मानिसले नै आफ्नो सानो मुटुमा साहस बटुलेर मृत्युको सामना गर्दै पाशविकतालाई चुनौती दिएको कुरा सम्झन्छु र भन्छु– मनुष्यलाई हरेस खाने आवश्यकता छैन (कोइराला, उही, पृ १५/१६) ।’
आचार्यलाई भने संसारलाई चकित पार्ने लाखौँलाख मानिस सडकमा उत्रिएको प्रलयकारी जनआन्दोलनले पनि उत्साहपूर्ण बयान गर्नुपर्ने स्तरमा प्रभावित पारेको देखिन्न । आन्दोलनको आकार, जनताको लोकतन्त्रप्रतिको भव्यतम अनुरागबारे आचार्यले थाहा पाएनन् भनौँ भने पनि उनकै भनाइमा बीपीजस्तो कालकोठरीमा होइन, मोबाइल फोन प्रयोग गर्न सकिने ‘थुनुवा’ जीवनमा थिए । यो त उदाहरण मात्रै हो नेताहरुबारे, उनीहरुको प्राथमिकता, जनताप्रतिको उनीहरुको आत्मीयता, समर्पण र विश्वासको ।
आफ्नो बन्दी वृत्तान्तभरि आचार्य नेपाली राजनीतिको निर्णायक स्तम्भ नेपाली जनता र तिनको बलियो संघर्ष हो भन्ने विश्वासमा रहन सकेको देखिँदैन ।
आचार्य भने परमुखी भएर किताबभर उद्घाटित हुन्छन् । उनी लेख्छन्, ‘राजा ज्ञानेन्द्रको घोषणा र अबको सन्दर्भमा माओवादीले कसरी लेलान् ? उनीहरुको तुरुन्तै र १५ दिनभित्र देखिने प्रतिक्रिया व्यवहार र कार्यक्रमले पनि यस कुराको आकलन र मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा कस्तो प्रतिक्रिया आउला (पृ १९) ?’ राजाका कदम र लोकतन्त्रको अपहरणका सम्बन्धमा भारतको वास्तविक नीति बुझ्न सकिँदैन (पृ २४) । ‘नेपालमा भएको घटना’ लाई सामान्य मान्न नसकिने र यस्तो परिस्थितिमा भारतले सम्मेलनमा भाग लिन कठिनाइ हुने भन्नु राजनीतिक महत्वको देखिन्छ (पृ ३१) । माओवादीको हौवा देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आँखामा छारो हाली देशभित्रका लोकतन्त्रवादीलाई दबाउन सकिन्छ कि भन्ने ज्ञानेन्द्रको मनसाय पूरा हुन त्यति सहज र सजिलो देखिएन (पृ ४६) । अमेरिकी विदेशमन्त्री कोन्डालिजा राइसको भारत भ्रमण र भारतीय विदेशमन्त्री नटवर सिंहसमेतको संयुत्त प्रेस सम्मेलनमा अभिव्यक्त विचार नेपालका निम्ति पनि गम्भीर महत्वको देखियो (पृ १२३) । यस्ता प्रसंग अनेकन पटक दोहोरिएका छन् ।
अझ आपत्तिजनक के भने कुनै दुई विदेशी राष्ट्रबीचको भेटघाट र जारी वक्तव्यमा तेस्रो राष्ट्र नेपाललाई मुछ्ने विषय महत्वको हुन्छ कि आपत्तिको ? अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक अभ्यास, राष्ट्रसंघीय बडापत्रविपरीत नेपाल उपस्थित नै नरहेको तेस्रो पक्षको वक्तव्यमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिबारे टिप्पणी गर्ने विषय आचार्यलाई महत्वको लाग्नु खेदजनक छ । त्यसरी नै संविधान जारी भएपछि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जारी भारत र तेस्रो राष्ट्रबीच जारी वक्तव्यमा नेपाललाई मुछ्ने हौसला आचार्यजस्तै त्यस्ता कदमलाई महफ्वपूर्ण मान्ने राजनीतिककर्मीको भित्री उक्साहटमा प्रकट भएको रहेछ भन्न सकिन्छ ।
उनै आचार्यका आदर्श बीपीमा भने राजनीतिप्रति कति गहिरो प्रतिबद्धता छ ! आफूले वितरण गरेको विश्वासमा बाँधिएर जेलनेल भोग्न विवश कार्यकर्ता पंक्तिप्रति कति उत्तरदायित्वको अनुभूति छ उनमा ! लेख्छन्, ‘जब उनीहरुलाई सम्झन्छु, मलाई उत्साह आउँछ र जीवनका तुच्छता मबाट टाढा हुन्छन् । यदि मैले नेपालका लागि केही गर्न सकेँ भने म... त्यस्ता अनेकानेक व्यक्तिहरुप्रति आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको ठान्नेछु (कोइराला, उही, पृ ३८) ।’ तर आजका दिनमा आचार्य त बरु अरुभन्दा निकै संवेदनशील मानिन्छन्, आफैँलाई नेता बनाउन लड्दा कोखमा अड्किएको छर्रा निकाल्ने उपचार खर्च नपाएर कार्यकर्ता बिचल्ली हुँदा नेताहरु बिचौलियासँग क्रान्तिको साँवाब्याजको हिसाब असुलिरहेका भेटिन्छन् ।
पुस्तकभरि आचार्य आफ्नो परिवारको सुख–दु:ख, छोरीहरुको पढाइ, उनीहरुको प्रगति, शैक्षिक आर्थिक उन्नतिले उनमा ल्याएको खुसीलाई एउटा गम्भीर पिताको हिसाबले उचित जिम्मेवारी देखाउँछन् । यो स्वाभाविक पनि हो– हरेक अभिभावकलाई आफ्ना सन्तानको शिक्षा–दीक्षा, उनीहरुको प्रगति, उन्नयनले खुसी तुल्याउँछ । तर आचार्य पुस्तकभरि आफ्नो परिवार, सन्तानबारे यति धेरै केन्द्रित छन् कि त्यसले नेपाली राजनीतिक पेसेवरहरुको आत्मचरित्रको उद्घाटन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । आफ्ना छोरीबारे जुन स्तरको चिन्ता, सरोकार प्रकट भएको देखिन्छ आचार्यमा– नेपाली समाज, जनताबारे रत्तिभर चिन्तन उनको डायरीमा देखिँदैन । त्यो एउटा विम्ब पनि होला, नेताहरु किन परिवारमुखी हुन्छन् र सत्तामा पुगेपछि जनता उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्दैन भन्ने । भन्नका लागि त भनिएला, राजनीति गरिएको, जेलनेल बसेको नै देश र जनताका लागि हो । तर व्यवहारमा हेर्दा देश र जनता झन्झन् किन हीनत्तर भएका छन् र राजनीतिबाहेक अर्को कुनै आयमूलक पेसा नअपनाएका राजनीतिकर्मीको जीवन सुकुम्बासीबाट समृद्ध हैसियतमा कसरी पुगिरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर राजनीति गर्नेहरुको दिमागमा प्राथमिकतामा को छ भन्नेले पुष्टि गर्छ । भलै, आर्थिक इमानदारीमा आचार्य फरक होलान् ।
निजी जीवनको अन्तर्यको सत्य भनिने डायरीमा मानिसले आफ्नो चेतना, चरित्रको सत्य उद्घाटित गर्छ भन्ने गरिन्छ । आन्दोलनका दिनमा बन्दी बनेको राजनीतिककर्मी कुनै पनि दिनको डायरीमा भुइँमा टाँसिएका नेपाली जनता, तिनका सन्तानहरुको भविष्य, दुःख–सुखबारे कहीँ पनि चिन्तनमा देखिँदैन । केवल राजाको कदमले खोसिएको आफ्नो सत्ताभोग कुन स्वरुपमा फिर्ता ल्याउने भन्ने सवालमा अरुभन्दा अलि बढी अगाडि जान खोजेजस्तो देखिन्छ । अरु राजासहितको लोकतन्त्र भनिरहेका बखत आचार्यले राजारहितको लोकतन्त्र भनेका हुन्छन् । त्यो राजाबिनाको लोकतन्त्रमा जनता कहीँ पनि उनको बहसको केन्द्रमा छैन । जनताको भविष्य कसरी उज्यालो बनाउने भन्ने चिन्ता र चिन्तन देखिँदैन । तर परिवारको चिन्ता र चिन्तन यति प्रभावी भएर उद्घाटित हुन्छ कि त्यसले नेताहरु दिमागमा परिवार, तिनको उन्नति, सुखसयललाई मन–मुटुमा राखेर राजनीति गरिरहेका हुन्छन् । र, पदमा पुगेपछि मनमा सुषुप्त तवरले गडेर बसेको त्यही परिवार, नातेदार, आफन्त सुख, खुसीको संसार जोड्न पदको ‘सदुपयोग’ गर्छन् भन्ने प्रस्ट्याउँछ । त्यसैको प्रकटीकरण आजका दिनमा सासंदहरुले आफ्ना पीए सालासाली, भान्जाभान्जी, छोराछोरी रोजेको देखिन्छ । नियुक्तिमा नातावाद र पैसा प्राथमिकताका साथ अघि आएको छ । उल्लिखित विवरणले आचार्यको पुस्तक हाम्रा नेताहरुमा निहित तर दमित रुपमा रहेको चिन्तन, चरित्रको उद्घाटन गर्ने वृत्तान्त हो भन्दा फरक पर्दैन ।
राजाको सम्पत्ति पारदर्शी हुनुपर्छ भन्दा कारबाही भोगेको उल्लेख गरेका आचार्यले नेताको सम्पत्ति पारदर्शी हुनुपर्छ भनेको कहीँ पढ्न पाइँदैन । आचार्यले पुस्तकमा कसरी एउटै पार्टीमा रहे पनि राजनीति गर्नेहरुको नाभि भिन्नभिन्न स्वार्थग्रन्थिद्वारा पालित–परिचालित भएको हुन्छ भन्ने प्रस्ट संकेत गरेका छन् । उही पार्टीका सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी, रामशरण महत खुलेआम पत्रकार सम्मेलन गर्दै हिँड्दा, सभा–गोष्ठीमा सरिक हुँदा पनि पक्राउ नपर्ने तर काठमाडौँ कांग्रेसका नेता भीमसेनदास प्रधानसमेत लुकीलुकी हिँड्नुपर्ने अवस्था आउनुले नेताहरुको नाभि कता जोडिएको छ भन्ने संकेत गरिदिन्छ । त्यो त उदाहरण मात्रै हो । महाकाली सन्धि गर्दा देशलाई स्याटेलाइटमार्फत बिजुली बेचेर यति खर्ब, उति अर्ब नाफा हुन्छ भन्दै सार्वजनिक तवरले बोल्नेहरु सन्धि पारित गराउन पार्टीका सांसदलाई होटलमा थुनेर भेडाबाख्राको जस्तो मोल लगाउनेहरु जनता झुक्याउन राष्ट्रवादीको अभिनय गरेको र भोटको स्वार्थ पूरा भएपछि सक्कली अनुहारमा प्रकट हुन थालेको तथ्य हाम्रैसामु छ ।
पुस्तक : गणतन्त्रको यात्रा बन्दी वृत्तान्त | लेखक : नरहरि आचार्य | प्रकाशक : सांग्रिला बुक्स | पृष्ठ : ६३७ | मूल्य : ९९५ रुपैयाँ |
लोकतन्त्रलाई परिपक्व, विकसित र समृद्ध पार्न कुनकुन पक्षलाई एकत्रित र समाहित गर्नु जरुरी छ ? लारी डायमन्डले १ सय ७७ देशको अध्ययन गरेका छन्, डेभलपिङ डेमोक्रेसीः टुवार्ड कन्सोलिडेसनमा ।
वर्षको आधाजसो समय ओशो दर्शन र ध्यान सन्देशको प्रचारका लागि विदेशमै बिताउँछन्, स्वामी आनन्द अरुण । पाएका जति निम्ता मान्ने हो भने बाह्रै महिना विदेशमै हुन्छन् । आनन्द अरुणको पछिल्लो किताब ओशो : अचम्म जो मैले देखेँमा यस्ता अनेक किस्साबाजी छन् । तिनले ओशोको विपुल व्यक्तित्व देखाउँछन् ।
प्लेटोको प्रोटागोरसमा सोक्रेटस आफ्ना चेला र अन्य जिज्ञासुसँग संवादरत छन् । कुनै शब्दलाई टिपेर त्यसका अर्थहरुको गहिरो संरचनासम्म पुग्नलाई प्लेटो बुझ्नु आवश्यक छ ।
चार घन्टासम्म नमस्कार गरेर बस्नुपरेको पीडा सुनाउँदै एक खेलाडीले भनिन्, “मनोबल बढाउनु त परै जाओस्, पदाधिकारीको भाषण सुन्दा हामीलाई ठूलै पापको सजाय खेपेजस्तो लाग्यो ।”
स्थानीय किसानको जीवनशैली बदलिएको छ । पोखरीमा माछा पानीसँग खेल्छन् । किसान पैसासँग । किसान जागे के हुन्छ ?
सरकार–सीके सहमतिबारे सत्ता घटककै नेता यत्रोविधि असन्तुष्ट हुनुको गुह्य भने बुझ्न सकिएन । शृंखलाबद्ध सिकायत सुनिसक्दा लाग्यो, यी नेताहरुका लागि सहमतिको प्रश्न होइन, नेकपाभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि मुख्य हो ।
भानुभक्तको सालिक चाइना एड्ले बनाइरहेको दरबार हाइस्कुलको पर्खालमा च्यापिएको छ । विस्मय के छ भने उनको बिर्खेटोपीमाथि कसैले साइकलको हेलमेट भिराइदिएछ, आँखामा चस्मा सिउरिदिएछ । यसलाई सनक भन्ने कि सम्मान !
बुद्धस्थल प्राचीन कपिलवस्तु । तिलौराकोटको माटो छुन पाउँदा निकै खुसी हुन्छन्, धार्मिक पर्यटक । बुद्धलाई शान्तिका लागि उत्प्रेरित गर्ने नेपाली भूमिमा विभिन्न देशबाट गरिब, विपन्नसमेत दैनिक छाक कटाएर अन्नपात र पैसा जोहो गरी आइपुग्छन् ।
संसारका लागि महत्त्वपूर्ण यस्तो श्रद्धा र आस्थालु ठाउँको संरक्षण भने छैन । राजा शुद्धोधनको राजप्रासाद तथा गौतम बुद्धले युवावस्था बिताएको स्थल तिलौराकोटमा कतिपय पर्यटक र उपासक/उपासिका प्रार्थनाका लागि आफैँ बोरा बोकेर जानुको विकल्प छैन ।
कपिलवस्तुमा रहेको निग्रोधारामको पनि उस्तै बिजोग छ । दर्शनका लागि घन्टौँ लाइन लाग्नुपर्छ । निग्रोधाराम, अर्थात् बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेपछि मातापितालाई पहिलो पटक भेटेको स्थल ।
नवलपरासीस्थित पुरातात्त्विक स्थल रामग्राम उस्तै उपेक्षित छ । रामग्राममा बुद्धको अस्तु धातु रहेको पुरातत्त्वविद् बताउँछन् । यी ठाउँ पुग्ने बाटोघाटो पनि भत्केर बेहाल छ । चारैतिर कोलाहल र धूवाँ–धूलोले आक्रान्त छ । ध्यान गर्ने, बस्ने वातावरण छैन ।
तिलौराकोटमा घुम्ने, रमाउने, ध्यान र प्रार्थना गर्ने पूर्वाधार अभावमा पर्यटक आउन नपाउँदै फर्किन्छन् । जापानीज ट्रस्ट इन फन्डको सहयोगमा बेलायतको दुह्राम विश्वविद्यालय, पुरातत्त्व विभाग र लुम्बिनी विकास कोषले गरेको सर्वेक्षणले तिलौराकोटमा पर्यटक औसत ३९ मिनेट बस्ने गरेको देखाएको छ । तिलौराकोट आउने पर्यटक पश्चिमी र पूर्वी द्वार तथा मध्यमा रहेको राजप्रासाद अवलोकन भ्रमण गरेर फर्कने गरेका छन् । एक पर्यटकले १ सय १० रुपैयाँ मात्र खर्चने गरेका छन् ।
पर्यटक आकर्षित गर्ने वातावरण नहुँदा लामो समय बस्ने अवस्था नभएको पुरातत्त्वविद् बताउँछन् । “प्रशस्त ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सम्पदा भईकन पनि पर्यटकलाई लोभ्याएर टिकाउनै सकेका छैनौँ । अवस्था निराशाजनक छ,” लुम्बिनी विकास कोषका प्रमुख पुरातत्त्व अधिकृत कृष्णबहादुर केसी भन्छन्, “अब सरोकारवाला मिलेर यहाँको बसाइँ लम्ब्याउनेतिर लाग्नुपर्छ ।”
अध्ययनअनुसार यहाँ आउने पर्यटकमध्ये ९० प्रतिशतले थोरै समय बिताउँछन् । १० प्रतिशत त आउनासाथ फर्किहाल्छन् । यहाँ श्रीलंका, म्यानमार, थाइल्यान्ड र भियतनामलगायत देशबाट सबैभन्दा बढी पर्यटक आउँछन् ।
लुम्बिनी विकास कोषका पुरातत्त्व अधिकृत हिमाल उप्रेतीका अनुसार पर्यटकीय स्थलको पूर्वाधार विकास गरेर होटल सञ्चालनमा ल्याउन सके ३ दिनसम्म पर्यटक सजिलै रमाएर बिताउन सक्छन् । कला, संस्कृति, रहनसहन र चरा, वन्यजन्तु अवलोकन यहाँका आकर्षण हुन् ।
पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन सके यस क्षेत्रका नागरिक रोजगारीका लागि अन्त जानै नपर्ने तौलिहवा उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष गयाद्दिन कुर्मी बताउँछन् । पर्यटन व्यवसायी किरणचन्द्र पौडेल थप्छन्, “यहाँको पर्यटकीय सम्पदाबाट व्यवसायीले कुनै फाइदा लिन सकेका छैनन् ।
विश्व सम्पदाको प्रारम्भिक सूचीमा परेको तिलौराकोट आउने पर्यटक अन्य बुद्धस्थलमा कमै जान्छन् । अध्ययनअनुसार तिलौराकोट आएका ११ प्रतिशत मात्रै राजा शुद्धोधन र रानी मायादेवीको समाधिस्थल धमनिहवा स्तुप पुग्छन्, जुन तिलौराकोट दरबारबाट ७ सय मिटरको दूरीमा छ । ९ प्रतिशत मात्रै तिलौराकोटदेखि ७ सय मिटर पश्चिम–दक्षिणमा अवस्थित कपिलवस्तु संग्रहालय अवलोकन गर्न जाने गरेका छन् ।
राजा शुद्धोधनको राजप्रासाद तथा बुद्धले २९ वर्ष युवावस्था बिताएको स्थल तिलौराकोट, सम्राट अशोकद्वारा स्थापित निग्लिहवा र गोटिहवा यहाँ रहेका छन् । त्यस्तै बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरी पहिलो पटक राजधानी आउँदा आफ्ना मातापितालाई भेटेको निग्रोधाराम र हजारौँ शाक्यको सामूहिक वधस्थल सगरहवा पनि छ । त्यसैले तिलौराकोटलाई सयभन्दा बढी पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक मनोरम पर्यटकीय स्थल रहेको संग्रहालय मानिएको छ ।
पूर्वाधार अभावकै बीच पनि पवित्र ठाउँ भएकाले अनुयायी र उपासक–उपसिका यहाँ आउन छाडेका भने छैनन् । लुम्बिनीस्थित रोयल थाई विहार प्रमुख भन्ते फ्रा श्रीबोधीविड्स सुपोत कित्तीवन्नोका अनुसार धार्मिक पर्यटक यहाँको मुख्य दरबार भग्नावशेषमा आई सूत्रपाठ, पूर्वी र पश्चिमी द्वारमा बुद्धको बाल्यकालको जीवनलीला पाठ गर्छन् र शान्तिको अनुभूति गरी फर्कन्छन् ।
पश्चिम सुर्खेतका पञ्चपुरी, चौकुने र बराहतालका बढीजसो युवा कामको खोजीमा भारत जान्छन् । यहाँका अधिकांश युवाको पढ्ने र रोजगारी गर्ने उमेर भारतमा कुल्ली काम गरेरै बित्छ ।
शब्द/तस्बिरः मैत्या घर्तीमगर
असार लागेसँगै रुकुम पूर्व तकसेराका मगरबस्ती उल्लासमय हुन्छन् । यो मौसममा डाँडाकाँडा मात्रै हरियो हुँदैन, किसानको मनमा पनि नयाँ उमंग छाउँछ ।
शब्द/तस्बिर : सरोज बैजु
डेढ वर्षअघि तीनै तहका चुनावमा वामपन्थी गठबन्धनलाई भारी मत हालेर जिताएका काठमाडौँका रैथानेलाई के थाहा, तिनैका क्रियाकलापविरुद्ध यति छिट्टै सडकमै उत्रनुपर्ला भनेर !